စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးတှနေဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးမှတျရာမြား
ပျေါတူဂီနာမညျကြျောကစားသမားစီရျောနယျလျဒိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ အိုငျယာလနျကို(၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ အနိုငျဂိုး(၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ သူက နိုငျငံတကာဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ (၁၁၁)ဂိုးနဲ့ရပျတညျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အီရနျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးအလီဒါယီကို ကြျောဖွတျပွီးတော့ စံခြိနျသဈတငျနိုငျခဲ့တာဖွဈသလို အဲဒီသှငျးဂိုး(၁၁၁)ဂိုးကို မတူညီတဲ့ပုံစံ၊ မတူညီတဲ့ပွိုငျဘကျတှကေို သှငျးယူခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးတှနေဲ့ပတျသကျလို့ အသေးစိတျခှဲခွမျးစိတျဖွာကွညျ့ရအေောငျလား . . .
စီရျောနယျလျဒို နိုငျငံတကာခွစေဈပှဲတှမှော ထိပျတနျးအဆငျ့ဂိုးသှငျးစှမျးရညျပွသနိုငျခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲ(၄၂)ပှဲမှာ (၃၃)ဂိုး၊ ယူရိုခွစေဈပှဲတဈလြှောကျ (၃၅)ပှဲကစား၊ (၃၁)ဂိုးအထိသှငျးယူခဲ့တဲ့အတှကျ နိုငျငံတကာခွစေဈပှဲတှမှော စုစုပေါငျး(၇၇)ပှဲကစား (၆၄)ဂိုးအထိသှငျးယူခဲ့တာပါ။
ခွစေမျးပှဲတှမှောတော့ သူ့ရဲ့အားထုတျမှုက သာမနျအနအေထားလောကျသာရှိတယျလို့ သတျမှတျရမှာဖွဈပမေယျ့ ခွစေမျးပှဲ(၅၁)ပှဲမှာ၊ (၁၉)ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဓိကနိုငျငံပွိုငျပှဲကွီးတှဖွေဈတဲ့ ယူရိုနဲ့ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲနှဈခုပေါငျးမှာ သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးအရအေတှကျက (၂၁)ဂိုးအထိရှိပွီး ယူရိုမှာ(၂၅)ပှဲကစား (၁၄)ဂိုး၊ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာတော့ (၁၇)ပှဲကစား (၇)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ယူရို-၂၀၂ဝပွိုငျပှဲမှာ ပလာတီနီကို ကြျောဖွတျပွီးတော့ ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျသှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျအပါအဝငျ တဈဦးခငျြးစံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
ကနျြတဲ့ပွိုငျပှဲတှဖွေဈတဲ့ UEFA Nations League မှာ (၆)ပှဲကစား၊ (၅)ဂိုး၊ ကှနျဖကျဒရေးရှငျးဖလားပွိုငျပှဲမှာ (၄)ပှဲကစား၊(၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့လို့ ပျေါတူဂီအသငျးအတှကျ စုစုပေါငျးပှဲ(၁၈၀)မှာ သှငျးဂိုးအရအေတှကျက (၁၁၁)ဂိုးပွညျ့မွောကျခဲ့တာပါ။
စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုး(၁၁၁)ဂိုးမှာ ဘယျခွနေဲ့ (၂၅)ဂိုး၊ ညာခွနေဲ့(၅၈)ဂိုး၊ ခေါငျးတိုကျဂိုး(၂၈)ဂိုးရှိခဲ့ပါတယျ။
ပယျနယျတီဧရိယာအတှငျးသှငျးယူခဲ့တာက (၉၀)ဂိုး၊ ပယျနယျတီဧရိယာပွငျပမှာ(၂၁)ဂိုးသှငျးယူခဲ့သလို အဲဒီထဲမှာ ဖရီးကဈကနေ (၁၀)ဂိုး၊ ပယျနယျတီသှငျးဂိုးက(၁၄)ဂိုးရှိခဲ့ပွီး ဟကျထရဈအကွိမျပေါငျး(၉)ကွိမျအထိရယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒိုရဲ့သှငျးဂိုးတှထေဲမှာ ပယျနယျတီကနသှေငျးယူခဲ့တာက (၁၄)ဂိုးသာရှိလို့ ပွိုငျဘကျပရိသတျတှသေတျမှတျထားသလို ပယျနယျတီတှနေဲ့ပဲဂိုးသှငျးနိုငျတဲ့ ‘Penaldo’ မဟုတျဘူးဆိုတာ အခကျြအလကျတှအေရအထငျအရှားတှမွေ့ငျရမှာပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ
ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော်ကစားသမားစီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အိုင်ယာလန်ကို(၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ၂၀၂၂ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ အနိုင်ဂိုး(၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် သူက နိုင်ငံတကာဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် (၁၁၁)ဂိုးနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အီရန်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးအလီဒါယီကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလို အဲဒီသွင်းဂိုး(၁၁၁)ဂိုးကို မတူညီတဲ့ပုံစံ၊ မတူညီတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို သွင်းယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရေအောင်လား . . . စီရော်နယ်လ်ဒို နိုင်ငံတကာခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ(၄၂)ပွဲမှာ (၃၃)ဂိုး၊ ယူရိုခြေစစ်ပွဲတစ်လျှောက် (၃၅)ပွဲကစား၊ (၃၁)ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာခြေစစ်ပွဲတွေမှာ စုစုပေါင်း(၇၇)ပွဲကစား (၆၄)ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့တာပါ။ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာတော့ သူ့ရဲ့အားထုတ်မှုက သာမန်အနေအထားလောက်သာရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် ခြေစမ်းပွဲ(၅၁)ပွဲမှာ၊ (၁၉)ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဓိကနိုင်ငံပြိုင်ပွဲကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ယူရိုနဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနှစ်ခုပေါင်းမှာ သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးအရေအတွက်က (၂၁)ဂိုးအထိရှိပြီး ယူရိုမှာ(၂၅)ပွဲကစား (၁၄)ဂိုး၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ (၁၇)ပွဲကစား (၇)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲမှာ ပလာတီနီကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်သွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်အပါအဝင် တစ်ဦးချင်းစံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ UEFA Nations League မှာ (၆)ပွဲကစား၊ (၅)ဂိုး၊ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာ (၄)ပွဲကစား၊(၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့လို့ ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် စုစုပေါင်းပွဲ(၁၈၀)မှာ သွင်းဂိုးအရေအတွက်က (၁၁၁)ဂိုးပြည့်မြောက်ခဲ့တာပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး(၁၁၁)ဂိုးမှာ ဘယ်ခြေနဲ့ (၂၅)ဂိုး၊ ညာခြေနဲ့(၅၈)ဂိုး၊ ခေါင်းတိုက်ဂိုး(၂၈)ဂိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ပယ်နယ်တီဧရိယာအတွင်းသွင်းယူခဲ့တာက (၉၀)ဂိုး၊ ပယ်နယ်တီဧရိယာပြင်ပမှာ(၂၁)ဂိုးသွင်းယူခဲ့သလို အဲဒီထဲမှာ ဖရီးကစ်ကနေ (၁၀)ဂိုး၊ ပယ်နယ်တီသွင်းဂိုးက(၁၄)ဂိုးရှိခဲ့ပြီး ဟက်ထရစ်အကြိမ်ပေါင်း(၉)ကြိမ်အထိရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့သွင်းဂိုးတွေထဲမှာ ပယ်နယ်တီကနေသွင်းယူခဲ့တာက (၁၄)ဂိုးသာရှိလို့ ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်တွေသတ်မှတ်ထားသလို ပယ်နယ်တီတွေနဲ့ပဲဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ ‘Penaldo’ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အချက်အလက်တွေအရအထင်အရှားတွေ့မြင်ရမှာပါ။
နောဝဈချြနဲ့ပှဲမှာရှုံးနိမျ့ခဲ့ရငျ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးဝငျစံခြိနျမှတျတမျးဆိုးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရမယျ့ အာဆငျနယျ